★မြန်မာ့အလင်း★: မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် နယ်စပ်တွင် အကြမ်းဖက် လူသတ် အုပ်စု တစု ပေါ်ပေါက်နေ
စစ်သား၊ ဒီမို၊ ရခိုင်၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ ကရင်၊ကယားဆိုတဲ့ အစွဲအလန်းတွေကြီးနေရင် စည်းလုံးမှု မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အားလုံးဟာ မြန်မာဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို သွင်းမှ စည်းလုံးနိုင်ပါမယ်။ မြန်မာဆိုသည်မှာ ကရင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ပလောင်၊ ပအို့၊ ဗမာအားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ မြန်မာစိတ်ဓါတ်မရှိပဲ.. သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းစိတ်ထားတွေကြောင့် . . . . တိုင်းရင်းသားတစ်ခုက တစ်နိုင်ငံစီထောင်ချင်နေလို့ . . . ငါတို့မြေပေါ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကျွန်ကုလားတွေ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာခံနေရပြီ။ (အရှေ့ဘက်မှာလဲ ၀တရုတ်က ပြည်နယ်ယူထားတယ်) အဲဒီဒေသက မြန်မာတွေဟာ ကျွန်ကုလားကို ကြောက်နေရတယ်တဲ့။ ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာအားလုံးအရှက်ရသင့်တယ်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလဲ ပြောလိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ကို ဗမာဘုရင်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အစွဲကိုဖျောက်ပါ။ အခုဟာ ရှင်ဘုရင်ခေတ် မဟုတ်ဘူး။ အရှင်သခင်နဲ့ ကျွန်တွေလို သဘောထားတဲ့ခေတ် မဟုတ်ဘူး။ ဗမာလူမျိုးပဲ မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ရခိုင်ဆိုပြီး နှိမ်ချခွင့်လဲ မရှိဘူး။ ရခိုင်တွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်သလိုပဲ ဗမာတွေဟာလဲ တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးဟာ တန်းတူ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ ဘာသာမတူ ယဉ်ကျေးမှုမတူညီတဲ့သူတွေ ရင်ပေါင်တန်းပြီး နေထိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးပါ။ အဲဒါကို. . . သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဗမာတွေရဲ့ ကျွန်တွေလို့ ခံစားနေရရင်.. ဗမာတွေကငါတို့ရဲ့ အရှင်သခင်လို့ စွဲထင်နေရင်တော့ . . . အဲဒီ ကျွန်စိတ်ကြီးကို ဖေါက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ကနေ ရခိုင်ကိုခွဲထုတ်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ရခိုင်ပြည်နယ်လေးကိုခွဲထုတ်ပြီး အုပ်ချုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ဖျောက်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို အရည်အချင်းရှိအောင် ပျိုးထောင်ပါ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအရေးတစ်ခုပဲကြည့်နေတဲ့ (လူမျိုးရေးမျက်ကန်းစိတ်) စိတ်ဓါတ်ကိုဖျောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံးအရေးကို ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အဲဒီကတဆင့်. . . မြန်မာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားက ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးကို အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဟာ အင်မတန်ကို ကြီးမားလှပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ်က သာယာဝပြောမယ်ဆိုတဲ့ ပေါက်ကရစကားတွေလည်း မပြောပါနဲ့။အဲလိုခွဲထွက်ရင် . . လက်တစုတ်စာ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ပဲ အဏာတွေရပြီး . . . ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အခုထက်ပိုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုလားကို ကြောက်ရမယ်ဆိုတာ အရမ်းကိုသိသာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗမာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုပေါင်း နေထိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးကို အုပ်ချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မြန်မာစိတ်နဲ့ တိုင်းတပါးတွေရန်ကိုလည်း စုပေါင်းကာကွယ်ပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
မူရင်း = နိရဉ္စရာသတင်းဌာန